Madagascar Matin » Antohomadinika – Ramatoa voan’ny Avc karohin’ny fianakaviany
Aretina iray mety hahavoa ny rehetra ny Avc na aretin’ny ati-doha mahatonga fahaverezan’ny fitadidiana eo amin’ny olona iray. Maro anefa ireo olona tratran’io aretina io no tsy afaka mitsabo tena akory noho ny sarany izay tena lafo tokoa. Mahakasika izany indrindra dia ramatoa 45 taona iray no karohan’ny fianakaviany fa tsy hita popoka nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka hatramin’izao. Monina ao Antohomadinika io vehivavy io ary tsy vao ela akory izy no tratran’io areti-mandoza io. Raha ny vaovao voaray tamin’ny fianakaviana dia efa tsy navela nivoaka ny trano izy ary mpanampy ao an-trano no nasaina niambina azy tamin’io fotoana io raha efa lasa nandeha niasa avokoa ny iray trano. Nisy fotoana anefa nandeha nanaingim-bary ity mpanampy ity ary nanararoatra nivoaka ity ramatoa ity. Nilaza ny olona mpiray vodirindrina fa nandeha nankany Atsimo izy ary nitondra ny poketrany. Niezaka nikaroka azy ihany ny fianakaviana iray manontolo avy eo saingy tsy hita mihitsy izay misy azy hatramin’izao. Sary no aparitaky ny fianakaviana entina ikarohana azy saingy tsy mbola nahitam-bokatra izany. Manahy mafy anefa ireo fianakaviany ny amin’ny zavatra mety mahazo azy satria maro ny olona mety hananararoatra azy. Ny tena mampatahotra azy ireo ihany koa dia ireo mety hanendaka azy satria poketra misy vola sy finday ilay nentiny nandeha. Mbola mitohy ny fikarohana ary efa miara-miasa amin’ny polisy ny fianakaviana amin’izao fotoana izao.